China Ọdịdị na-acha oji Black China na. | Nongchuanggang
Black galik, nke a na-eme nke galik dị ọcha ma gbaa ụka na igbe gbaa ụka na anụ ahụ maka 90 ~ 120 ụbọchị, nwere ezigbo mmetụta antioxidant. Oji galik bụ ụdị nri mmadụ niile ma. Iri galik ojii pụrụ ịdị mma maka ahụ ike, ọkachasị galik ojii ga-enyere aka kwalite ahụike arịa ọbara. Black garlic bụ nri dị ezigbo mma n’enweghị nsogbu ọ bụla. Ya mere, ndị mmadụ nwere ike zuru ike mgbe ha na-eri galik ojii, na enweghị taboo na collocations.
Black garlic dị nro dị ka jelii n'ọnụ ma enweghị ụdị ísì ụtọ nke galik na-acha ọcha mgbe ị risịrị nri. Ọ naghị ebute iwe na afọ. Soft uto, ụtọ na utoojoo na-enweghị mkpali. Iji mee ka ọtụtụ mmiri dị na galik, a na-edebe usoro ahụ dum, nke yiri ọdịdị nke mkpụrụ osisi mịrị amị.
Na ojii galiki allicin ọdịnaya bụ nnọọ ọgaranya, ị nwere ike họrọ eri black garlic dị mma maka ahụ ike, karịsịa eri nwa garlic nyere anyị aka igbu ọtụtụ influenza virus na ahu a dịgasị iche iche nke pathogenic microorganisms, ọ bara uru maka mgbochi nke ọrịa, na n'otu oge anyị na-ahọrọ iri nri ojii nwere antibacterial mgbochi mkpali utịp, ya mere, ndị ojii garlic ị nwere ike ghara ileghara ezi nhọrọ.
Oji galik dị mfe iri nri. Anyị nwere ike were galik ojii ozugbo. Maka ndị na-ewe oke iwe, ezuru ị garlicụ galik ojii ojii kwa ụbọchị. Maka ndị nkịtị ahụike siri ike, ha nwere ike iri obere galik ojii, mana ha ekwesịghị iri oke oke. Ọ dị mma iri galik ojii na-edozi oke.
Black garlic ga-achịkwa oke, mgbe ị ga-eri nri maka ndị toro eto, n'ozuzu kwa ụbọchị iji rie otu galik ma ọ bụ abụọ galik zuru oke, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhazi nsogbu nke afọ ntachi, yabụ anyị kwesịrị iri nri kwa ụbọchị galik atọ ma ọ bụ anọ, na chọrọ welie ọgụ site nwa garlic, na-kwesịrị eri ihe nwa garlic.
Typedị Nhazi: Sịga
Usoro Ihicha: AD
Tidị Cultivation: Griin haus, okpomọkụ dị elu
Aha Aha: galik ojii
Ọrụ: Melite afọ ntachi
Flavour: Sweettọ na utoojoo
Usoro nchekwa: Obere Okpomọkụ
Ihicha Usoro: AD
Salmonella: Na-adịghị mma
Na-eri ahụ: Onweghị
Flavour: Utoojoo na Sweettọ
Nke gara aga: Organic Ginger
Osote: Oyi kpọnwụrụ